Global Voices teny Malagasy · 8 Mey 2019
08 Mey 2019
Jolay 2021 49 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 08 Mey 2019
Maoritaniàna Bilaogera afaka tamin'ny fanamelohana ho faty, saingy mbola mihiboka am-ponja
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Mey 2019
Nenjehina noho ny lahatsoratra iray nanakianany ny anjara toerana raisin'ny finoana ao anatin'ny rafitra saranga ao Maoritania i Ould Mkhaitir .
Nanoratra hira momba ny herisetran'ny polisy ilay mpanao politika sady mpanakanto Ongadey nandritra ny fanagadrana azy tamin'ny trano ambenana
Mediam-bahoaka08 Mey 2019
Fa nahoana no midaroka ahy, tsy misy fahasamihafana amiko sy aminao? / Nahoana no nandaka ahy kanefa tsy manana olana aminao aho? / Talohan'ny nahatongavanao ho miaramila na mpitandro filaminana, dia olom-pirenena tsotra ianao / Alohan'ny handratrana ahy, henoy ny fitarainako.
RV Newsletter: Kendren'ity fehezampitaovana vaovao ity ny hanampy ny mpanao lahatsary hahatontosa fiantraikany lehibe kokoa
Ny taratasim-baovao Rising Voices no manolotra anao ireo rohy amin'ireo fidanadanana mifandraika amin'ny fampiatiana nomerika izay mahatafiditra ny fahafaha-miditra sy ny fandraisana fitaovana nomerika, sy ireo fomba isankarazany ho an'ny vondrom-piarahamonina handray anjara feno antserasera.
Mitaky Visa amin'ireo olom-pirenena amerikana i Bolivia
Amerika Latina08 Mey 2019
Tao anatina fanapahan-kevitra tsy nampoizina, nanambara ny governemanta Boliviana fa tsy hamela malalaka ny olom-pirenena Amerikana hiditra malalaka ao amin'ny firenena izy ireo raha tsy misy visa azo avy amin'ny kaonsilà.
Ny tsiahin'ny karnavaly lavitry ny firenena – votoaty tao amin'ny bilaogy Boliviana
Soa ihany fa misy ny fepetra fandosirana. Alohan'ny hamarananao, dia tokony hanana vitsivitsy eo an-tany ianao ho an'ny La Pachamama, reny tany.
Vovonana tany Londres – taona 2005
Natao ny 10 Desambra 2005 tany amin'ny foiben'ny Reuters tany Londres, Fanjakana Britanika ny Vovonana voalohany. Fihaonana nandritra ny tontolo andro nizara efatra ary natao voalohany indrindra ho an'ny mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, fa natrehin'ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa avy amin'ny mpanao gazety, fikambanana tsy mitady tombontsoa, sy ny...
Fantaro i Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 8 -14 May
Antsafa08 Mey 2019
Ndeha ho fantarina misimisy kokoa i Dámilọ́lá Adébọ́nọ̀jọ, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny 8 - 14 May 2019. Hizara ny vinany ho an'ny teny Yorùbá izy.